कति सुन्दर शीर्षक छ "बेकन र क्रीम संग Carbonara!" यसलाई यो पकवान घाम भू-मध्य आउन स्पष्ट हुन्छ भएपछि, सही हुन - इटाली ले। पक्कै पनि साथै यसलाई स्वाद?
यो साँच्चै हो। पास्ता carbonara - साँच्चै, स्वादिष्ट सुन्दर र सन्तोषजनक पकवान, कमाएको सम्मान र सबै दुनिया भर आदर छ। यसलाई विश्वभरिका धेरै रेस्टुरेन्ट मा सेवा छ। तपाईं एक प्रेम एक खुसी, वा सहकर्मी अमेट छाप बनाउन, आफ्नो साथीहरू प्रभावित गर्न चाहनुहुन्छ भने, चरण नुस्खा हाम्रो चरण मदत गर्नेछ तपाईं यो स्वादिष्ट पकवान कसरी पकाउन सिक्न।
को carbonara के हो
रूसी भान्सा नुस्खा नम्बर मा कठिन Boiling, प्यानकेकहरू, cutlets, बन्दागोभी, र अन्य लोकप्रिय व्यञ्जन अवस्थित छ। हरेक गृहिणी पक्कै तयारी र "गोप्य सामाग्री" को एक जोडी को वर्ष तरिका सिद्ध भएको छ। Carbonara संग नै बारेमा fared। इटाली प्रत्येक क्षेत्र यसको आफ्नै विशेष पास्ता carbonara छ।
बेकन र क्रीम संग नुस्खा पकवान को ऐतिहासिक मातृभूमि बाहिर थप सामान्य छ। र इटालियनहरू guanciale वा Pancetta प्रयोग गरेर यो पकवान तयार। साथै, तिनीहरूले सामान्यतया carbonara क्रीम थपियो र पनीर सस pecorino romano बनाउन छैनन्।
Guanchinale - एक उज्ज्वल अविस्मरणीय स्वाद विशेष उत्पादन हो। यसलाई जो बोसो संग मासु को तहहरू प्रतिनिधित्व पोर्क गालामा देखि तयार छ। Jowl उदार, त्यसपछि फैलाउन vyalitsya हप्ता 3. Finely कटा guanciale आवश्यक carbonara थपियो नुन, चिनी र इटालियन मसला को मिश्रण RUB।
Pancetta - यो बेकन को विविधता छ। वास्तवमा, यो पनि बेकन jerked छ मसला संग अनुभवी।
वैकल्पिक दुर्लभ घटक
सजिलै इटाली बाहिर प्रान्तीय यी Delights, वा ठूलो शहर भने तर, मलाई भन? केहि आए र guanciale र Pancetta बेकन थप साधारण प्रतिस्थापित किनभने। र दुर्लभ उच्च गुणवत्ता को सट्टा pecorino पनीर सादा पनीर पकवान पठाइएको छ। आज हामी पकाउने को यो विधि क्लासिक भन्दा कम लोकप्रिय छ भनेर भन्न सकिन्छ। आखिर, बेकन र क्रीम संग पास्ता carbonara पनि धेरै स्वादिष्ट छ।
बेकन र क्रीम अपेक्षाकृत सरल तयार संग Carbonara, पूर्व-प्रशिक्षण वा विशेष पाक कौशल लागि समय आवश्यक छैन। यो पकवान रोमान्टिक खाने को मुख्य सजावट बन्न सक्छ। यो र एक राम्रो हार्दिक नाश्ता वा भोजन बाहिर प्राप्त। पकवान हुनत कटा ताजा मौसमी तरकारी superfluous छैन यो नाश्ता, सलाद र अन्य थपिएको गर्न आवश्यक छैन, आत्म-पर्याप्त छ।
इटाली, Carbonara झन् "आँखा द्वारा" लिनका लागि आवश्यक सामाग्री। र पहिलो पटक यस पकवान तयार गर्नेहरूलाई, यो निश्चित अनुपात पालन गर्न राम्रो छ। निम्नानुसार तिनीहरूले लगभग हो:
tverdosortnoy गहुँ पास्ता - 400 ग्राम;
बेकन - 300 ग्राम;
कच्चा अन्डा -3पीसी;।
पनीर (grated) - 300-350 ग्राम;
तर - 300 एमएल;
स्वाद - लसुन, जवान तुलसी, जायफल, खुर्सानी को एक मिश्रण, नुन;
frying लागि तेल।
र अब हामी carbonara कसरी खाना पकाउनु छानबिन हुनेछ। दृष्टान्तहरू संग बेकन र क्रीम, पूर्ण साथ नुस्खा, तपाईंले सही र चाँडै सबै गर्न मद्दत गर्नेछ।
पकवान पास्ता garnish र सस हुन्छन्। यी घटक दोश्रो देखि अलग तयार छन्, र तिनीहरूले सेवा अघि तुरुन्तै सँगै जोडिएको छन्।
पहिलो चरण पानी जोश हुन्छ। यो कम्तिमा पनि डेढ लिटर हुनुपर्छ, त्यसैले पास्ता राम्रो स्वाद हुनेछ। उम्लिरहेको बेला, एक सानो तेल र podsolite पानी मा खन्याउन।
जब सम्म प्याकेज मा निर्देशित लागि, पास्ता डाउनलोड र खाना पकाउन, खोल।
अन्डा, क्रीम, र parmesan अधिकांश र whisk जडान whisk। यो कल्पनासमेत नगरेको वास्तविक पास्ता carbonara छ बिना जायफल र मसाले, थप्नुहोस्।
बेकन र क्रीम संग नुस्खा हावी यी दुई स्वाद हुनेछ implies। त्यसैले बेकन खाना पकाउने तल प्राप्त। यसलाई पूर्ण पारदर्शी सम्म तेल संग गहिरो कराइ मा सानो र भुट्नु मा कटौती गर्न आवश्यक छ। धेरै अन्त मा ठूलो स्लाइस र तुलसी मा कटौती गर्ने बेकन थप्न।
हाम्रो पास्ता पक्के यो समय पकाएको छ। पानी खाली र बेकन लागि पैन गर्न पास्ता पठाउन गर्नुपर्छ। यो क्रीम र अन्डा को एक सस थप्न रहनेछ। आगो तुरुन्तै बन्द र पैन सामग्रीहरू हलचल गर्नुपर्छ।
त्यो बेकन र क्रीम तयार सबै हाम्रो पास्ता carbonara छ। तपाईं तालिका सबै आमन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ!
सम्झना, हामी सस सबै चीज थपियो छ? बाँकी अंश हामी भुइँमा सेवा, बस spilling crumbs अघि पकवान सजाउनु हुनेछ। सजावट बेकन र क्रीम हाम्रो carbonara पनि अधिक appetizing र flavorful हुनेछ जो जवान र हरियो, धन्यवाद लागि सिद्ध छ।
काँटा र चक्कु - यो पकवान पारंपरिक कटलरी संग खान बनेको छ। पकवान एक पूरक रूपमा, तपाईं एक टोष्ट वा croutons, चेरी टमाटर, ककडी, मुला फाइल गर्न सक्छन्। त्यहाँ तालिका मा जैतून को कुनै अतिरिक्त जार हुनेछ - यो खाजा मात्र इटालियन व्यञ्जन प्रकृति जोड, र स्वाद पूरक।
एकदम सजिलै र बस घरमा कद्दू देखि रस तयार
तपाईं को लागि चामल र अन्डा संग केक
को सुकेको रूपमा सबै निको गुण राख्न नितम्ब गुलाब
Multivarka "पोलरिस" मा स्वादिष्ट मटर porridge: कसरी खुशबूदार लाउने संग खाना पकाउनु?
Golubitskaya मा समुद्र द्वारा Guesthouse: छुट्टी समीक्षा
खेल Warframe: सिस्टम आवश्यकताहरु
को प्रधानमन्त्री र समाधान को शूटिंग मा ढिलाइ
Nordstar एयरलाइन एयरलाइन्स: लाभ र बेफाइदा
को "Vasiliya Terkina" को इतिहास - कविता Twardowski
छुट्टी मान्छे वीर पेशा - दिन गोताखोर
सूची: अर्थशास्त्र र वित्त सम्बन्धित व्यवसाय। जो अर्थव्यवस्था सम्बन्धित पेशों?
आफ्नो हातमा लाग्यो को चरा